Sawirro: Musharax madaxweyne oo deyn ku sameystay boorar lagu dhejiyey Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Musharax madaxweyne oo deyn ku sameystay boorar lagu dhejiyey Muqdisho
Sawirro: Musharax madaxweyne oo deyn ku sameystay boorar lagu dhejiyey Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho iyo goobaha ay dadka ku badan yihiin ayaa murashax walba wuxuu ka taagtay tabeelo ku sawiran sawirkiisa iyo hal ku dhigyo uu ku muujinaayo hiigsiga uu damacsan yahay marka uu guuleysto wixii uu dadka ku hoggaamin lahaa.
Goobaha murashaxiinta sawiradooda is dhinac safeen waxaa ka mid ah wadada Maka-mukarama, Daljirka Dahsoon, Sayidka ilaa dhismaha baarlamaanka iyo wadada kasoo baxda garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde.
Arinta dadka Muqdisho ay hadal hayaan oo soo ogaanay ayaa ah in murashax C/naasir Cabdulle tabeelahiisa lagu sameeyay deyn, wuxuuna ilaa seddax meel uu ka suray wadada Maka mukarama iyo agagaarka garoonka diyaaraddaha Muqdisho.
Murashaxiinta tabeelooyinkooda ay ku badan yihiin wadooyinka ayaa waxaa ka mid ah C/raxmaan C/shakuur oo dhowr meelood laga taagay sawiradiisa oo waaweyn, Jabriil Cabdulle iyo Maxamed Cali Ameeriko.
Murashaxiinta kale ee hal halka tabeele taagtay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Axmed Nuur “Tarsan iyo C/raxmaan Faroole oo hal meel kaliya lagu arkayo tabeelahiisa.
Dhanka kale, Murashaxiinta muuqda ee awooda ku leh ololaha socda sida Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaan wax sawiradooda ah lagu arkeyn wadooyinka Muqdisho, kuwaasi oo ololahoosa si hoose u wato, laakiin u baahneyn in wadooyinka lagu xardho sawiradooda.